HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Ngangela Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Hoatran’ny hoe vao omaly ianao no nitrotro ny zanakao, nefa izao izy efa folo taona mahery sahady. Marina fa mbola zaza izy, nefa efa kely sisa dia hisy fiovana eo amin’ny vatany. Manomana azy ho lasa olon-dehibe izany.
Mampiady saina ireny fiovana ireny ary mety hahakivy indraindray. Ahoana àry no hanampianao ny zanakao hiatrika azy ireny?
Tsy mitovy ny fotoana itrangan’ilay fiovana. Ny an’ny ankizy sasany amin’izy 8 taona, fa ny an’ny hafa amin’izy 15 taona na mahery. Hoy ny boky Omeo Fitiavana sy Fatokisana Izy mba Hianatra Hahaleo Tena (anglisy): “Tsy mitovy ny fotoana anombohan’ny fiovana eo amin’ny ankizy tsirairay.”
Mahatonga ny ankizy ho be fanahiana ilay izy. Lasa manahy be izy hoe ahoana no fiheveran’ny olona azy. Hoy i Johary: * “Lasa nieritreritra be momba ny paoziko sy ny fihetsiko aho. Rehefa niaraka tamin’olona maromaro aho dia natahotra sao heverin-dry zareo hoe hafahafa.” Vao mainka kivy ny ankizy rehefa misy mony. Hoy i Mevasoa, 17 taona: “Hoatran’ny simba be ny tarehiko. Nisy fotoana aho nitomany sady nieritreritra hoe ratsy tarehy be.”
Sahirana ireo miatrika fiovana aloha kokoa. Ny ankizivavy no tena iharan’izany, satria mety hisy hananihany izy rehefa manomboka maniry ny nonony na miova ny bikany. Hoy ny boky iray momba ny fitaizana: “Mety ho liana amin’izy ireo koa ny ankizilahy be taona kokoa sady efa nanao firaisana.”
Tsy voatery ho matotra ny ankizy rehefa misy fiovana eo amin’ny vatany. Hoy ny Ohabolana 22:15: “Latsa-paka ao am-pon’ny zaza ny hadalana.” Mbola izany no izy na misy aza ilay fiovana. Milaza ny boky Ianao sy ny Zanakao (anglisy) fa na dia hoatran’ny efa lehibe aza ny ankizy iray, dia “tsy midika izany hoe mahay manapa-kevitra izy, na mahay mandray andraikitra, na mahafehy tena, na manana toetra hafa ananan’ny olona matotra.”
Resaho aloha be ilay izy. Resaho amin’ny zanakao ny zavatra hitranga eo amin’ny vatany, indrindra ny hoe ho tonga fotoana izy (raha ankizivavy), ary mety hivoaka tsirinaina rehefa matory amin’ny alina (raha ankizilahy). Tsy mandeha tsikelikely toy ny fiovana hafa ireo fa tonga tampoka, ary mety hampiady saina sy hampatahotra. Hazavao aminy fa mahasoa azy izany satria manomana azy ho lasa olon-dehibe.—Toro lalan’ny Baiboly: Salamo 139:14.
Ataovy feno tsara ny fanazavanao. Hoy i Haja: “Niolakolaka i Dada sy Neny rehefa niresaka momba ny fiovana hitranga amiko. Tiako raha nataony mivantana kokoa ilay izy.” Hoy koa i Antsa, 17 taona: “Nampian’i Neny aho hahalala ny zavatra hiova eo amin’ny vatako. Tiako anefa raha nampiany koa aho mba hahay hifehy ny fihetseham-poko rehefa mitranga ilay izy.” Resaho amin’ny zanakao daholo àry izay mombamomba an’ilay fiovana, na dia mahasadaikatra aza izany.—Toro lalan’ny Baiboly: Asan’ny Apostoly 20:20.
Mametraha fanontaniana mahatonga azy hiresaka. Ny zavatra iainan’ny ankizy hafa aloha resahina. Azonao anontaniana, ohatra, ny zanakao vavy hoe: “Efa misy mpiara-mianatra amin-dry ve miresadresaka hoe tonga fotoana?” “Hanihanin’ny namany ve ny ankizivavy raha mbola kely izy nefa efa misy fiovana eo amin’ny vatany?” Azonao anontaniana ny zanakao lahy hoe: “Esoesoin’ny namany ve ny ankizy raha taraiky be ny fitomboany?” Mety ho mora amin’ny zanakao ny hilaza ny zavatra tsapany sy iainany raha ny vokatr’ilay izy amin’ny hafa aloha no resahiny. Rehefa miresaka izy dia aoka ianao “ho mailaka hihaino, tsy ho maika hiteny.”—Jakoba 1:19.
Ampio ny zanakao hanana ‘fahendrena sy fahaiza-misaina.’ (Ohabolana 3:21) Tsy ny vatana sy ny fihetseham-pon’ny zanakao ihany no miova rehefa folo taona mahery izy. Lasa mahay misaina kokoa izy ary hanampy azy hahay hanapa-kevitra izany any aoriana any. Hararaoty izany mba hampianarana azy hanana fitondran-tena tsara.—Toro lalan’ny Baiboly: Hebreo 5:14.
Aza kivy. Betsaka ny ankizy hoatran’ny hoe tsy te hiresaka momba ny fiovana eo amin’ny vatany. Mety hamitaka anefa izany. Hoy ny boky Ianao sy ny Zanakao: “Mety hitadidy ny teny rehetra lazainao ny ankizy na dia hoatran’ny tsy liana aza izy, na sorena, na rikoriko, na manao be marenina.”
^ feh. 8 Novana ny anarana ato.
“Mahagaga sy mahatalanjona ny fomba nanaovanao ahy.” —Salamo 139:14.
“Tsy niahotra aho nilaza taminareo izay rehetra nahasoa.” —Asan’ny Apostoly 20:20.
“Tena nanampy ahy hiatrika ny fiovana teo amin’ny vatako ny ray aman-dreniko, indrindra fa i Neny. Naka fotoana izy mba hanazavana ny zavatra hitranga tamiko. Tsy tampoka tamiko intsony ilay izy avy eo. Nataony koa izay hahatonga ahy tsy hisalasala hiresaka taminy. Soa fa teo i Dada sy Neny dia lasa mora tamiko ny niatrika an’ireo zavatra nahasadaikatra ahy.”—Mino, 16 taona.
“Nanampy ahy ny ray aman-dreniko. Navelany ho irery, ohatra, aho indraindray satria fantany hoe nahamenatra ahy ireo fiovana teo amin’ny vatako. Tsy noresahiny tamin’iza na iza koa ilay izy. Mbola tsy nisy fiovana teo amin’ny vatako dia efa nampiomaniny aho.”—Salohy, 18 taona.